Ogaden News Agency (ONA) – Shirwaynihii Jaliyada Ogadenya ee gobolka Taxes oo ka dhacay magalarda Amarillo.
Shirwaynihii Jaliyada Ogadenya ee gobolka Taxes oo ka dhacay magalarda Amarillo.
Posted by ONA Admin	/ May 27, 2015
Shir waynihii jaaliyada somalida ogadenia we gobolka Texas ayaa malintii axada ahayd kadhcay magalada Amarillo ee gobolka Taxes cariga Maraykanka. shirkan oon loo kala hadhin Reer Texas sida Amarillo, Houston, San Antonio ,Dallas, ayaa waxaa kasoo qayb galay dhamaan jaaliyada ha kala ah (1) ogadenia (2) Somali wayn (3) iyo Oromia Ee gobolka Texas.
Shirkan waxa khudbado taariikhi ah oo badalay shucuurtii dad waynaha kasoo jeediyay madax sarsare oo kamid ah jabhada wadaniga xoraynta ogadenia sida mudane AXMAD MAJEERTEEN , mudane XASSAN TURKI iyo masuuliyiin kale oouu kamid yahay gudoomiyaha jaaliyada Maxamud Shaafi gudoomiyaha OYSU mudane Salax Maxamad gudoomiya ha dumarka ogadenia Halganto Nimco maxamad Xusen ,C/naasir nuur codey ,C/rashiid shiekh iyo masuuliyiin kale waxaana dhamaan laysku raacay inla labajibaaro halganka ogadenia ee xaqa ah.
Shirkan oo aad ubaldhanaa abidna aan horay uga dhicin gobolka Taxes shir nocan oo kala ah ayaa waxaa uu dalilcad u yahay sida xowliga ah ee uu u u gaamuray halnganka xoriyad doonka ah ee shacabk ogadenya ay ugu jiraan ay aka tashigooda
Shirkan ayaa jawii aad u wanagasan farxad iyo rayn rayn ku soo dhamaaday.